အမေ​ရိ​ကန်​ရောက်​မြန်မာ | J-Myanmar
ဒီ​လို​နဲ့ အမေ​ရိ​ကန်​အလုပ်​သမား​ဆို​ရှယ်​ကဒ် လက်​ထည်း​ရောက်လာ​တာ​နဲ့ လုပ်​ငန်း​စ​ဝင်​ရ​ပြီ​ပေါ့ လုပ်​၇​တဲ့​အလုပ်​က Made in USA . Hand made “Tecno” Tower display .jewelry Display Show case . မှန်​နဲ့​တည်ဆောက်​၇​တဲ့​အလုပ် ပရိ​ဘော​၈ အခြေ​ခံ​သ​မို့ သိပ်​တော့​မ​ခက်ခဲ​ဘူး​ပေါ့
အလုပ်​ကြိုးစား​တဲ့​နေရာ​မှာ​နစ်​ယောက်မ​ရှိ​ဘူး…လုပ်​ခ တ​နာရီ (၁​၄) ဒေါ်​လာ​လောက်​၇​တော့​မ​ဆိုး​ဘူး​လေး
၂​ပတ်​တ​ခါ​လုပ်​အား​ခ​၇​တယ် ၇​ငွေ​ထည်း​က အစိုး​၇ tax ဆောင်​၇​တယ်​လူ​တိုင်​ပါ​ပဲ .ဒိ​လို​နဲ့​လုပ်​သက်​တ​နစ်​ပြည့်​ခါ​နီး​တ​၇က်​မှာ​အလုပ်​မှာ လွ saw ဖြတ်​နေ​၇င်​လက်မ ပါ​ပါသွား​တာ​လက်မ
တ​ချောင်း​လုံ​မ​ပြတ်​ရုံ​တ​မယ်​ပါ​ပဲ ဒါ​နဲ့​ကျန်​နေ​တဲ့​တဘက်​နဲ​လွ​စက်​ခလုတ်​ပိတ်​ပြီး အလုပ်​ကSupervoier အကြောင်း​ကြာ​၇​တာ​ပေါ့ ဒါ​နဲ့ Rose ဆေး​ရုံး​အရေးပေါ်ခေါ်​သွား​တယ် .တ​နာရီ​လောက်​မေ့ဆေး​ပေး​ပြီး​ခွဲ​ခန်း
ဝင်​လိုက်​၇​တယ် ဖြစ်​တာ​က ဘယ်​လက်မ​ဆို​တော့ ဘယ်​လက်​ဖ​နောင့်​က​အသား​ဖြတ်​ယူ​ပြီ
ပြတ်​လု​လု လက်မ မှာ​ပြန်​အစားထိုး​ဆက်​စပ်+ချုပ်​ပေး​တာ​ပေါ့ ဟူး ..ချုပ်​ချက်+ (60)
လောက်​ရှိ​တယ်..ဒါ​နဲ့​အလုပ်​က​ခွင့်​ပေး​တာ (၂ ) လတာ​အတွင်း​ပေး​ချက်​ကတော့​ပုံ​မှန်​၇​ပါ
တယ် . ကု​ပ​ဏီ​က လုပ်သား​တန်း​ဘိုး​ထား​၇​တယ်​ဒါ​က ကု​ပ​ဏီ​တ​ခု​ရဲ့ ဥပဒေ​စည်းကမ်း​ပေါ့
ဆေး​ရုံး​ကိစ္စ​အစစအရာရာ ကု​ပ​ဏီ​က​ပဲ​တာဝန်​ယူ​၇​တယ် ကျွန်တော်​အထင်​ကျွန်တော်​လက် ဖြစ်​တာ​အနည်း​ဆုံး​ကု​ပ​ဏီ​က ဆေး​ရုံး ကျ​သင့်​ငွေဒေါ်​လာ(၃​၀⁠၀​၀​၀)လောက်
Social security . ဒါ​နဲ့ ( ၂ )လ အနား​ယူ​၇က်​ခွင့်​စေ့​တာ​နဲ့ အလုပ်​ပြန်​ဝင်​တော့ ဗ ချိုင့် လူ​မျိုး​အလုပ်​က​အဖော်​တွေ​က​မြောက်​ပေး​တယ်​ကု​ပ​ဏီ​တရား​စွဲ ခု​ဖြစ်​တာ​ကု​ပ​ဏီ​ပေါ့​ဆ​လို့ “ဖြတ်​စက်​လွ”cover ကာ​ဘာ​ဖြုတ်​ထား​လို့​မင်း​လက်​ထိ​တာ​စ
ဖြင့်​ပေါ့ အနည်း​ဆုံးဒေါ်​လာ (၅​၀⁠၀​၀⁠၀)လျော်​ကြေးငွေ​၇​နိင်​တာ​ပေါ့​စ​သ​ဖြင့် ကျွန်တော်​တရားမ​စွဲ​ပါ​ဘူး(သို့)အမေ​ရိ​ကန်​အခေါ်​အဝေါ်​မ​စူး​ဘူး​ပေါ့​ဗျာ ..ကို​က​ဗုဒ္ဒ​ဘာသာ​မဟုတ်​လား​ကိုယ်​ချင်း​စာ​စိတ်ထား​ရ​မယ်။ငါ​သာ​ကု​ပ​ဏီ​ပိုင်​ရှင်​တ​ယောံ​ဖြစ် ရင်​ကော​ဆို​တဲ့​အတွေး.. . ဒါ​နဲ့ Tecno က​နေ edd နဲ့​ပဲ​နတ်​ဆက်​ခဲ့​လိုက်​တယ်..
တ​ခု​မေ့​သွား​လို့ လက်​ပုံ​မှန်​ဆေး​ရုံး​၇က်​ချိန်​ပြ​၇​တော့ သူနာ​ပြု ဆရာ​မ​တွေ​က​တ​အား​ကြင်နာ​တယ်​လူ​နာ​အပေါ်။..မိမိ​ဝေဒနာ​ခံစား​ခိုက်​မ​သိ​သ​လိုလို မေး
Next post ရူး​ချင်​ယောင်​အဆောင်​လွန်
Previous post Enjoy Your Myanmar, Burma Travel Video